ချစ်ဆဲ….လွမ်းဆဲ…မိုးကုတ်မြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ချစ်ဆဲ….လွမ်းဆဲ…မိုးကုတ်မြေ
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Oct 31, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 18 comments
၂၀၀၅ ခုနှစ်က နိုင်င်္ငစုံ ယဉ်ကျေးမှု ကပွဲမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ။
တောင်စဉ်တောင်တန်းမှိုင်းပျပျတွေနဲ့ တောင်တွေရဲ့ အလယ်ချိုင့်ထဲမှာ လှပတဲ့ မြို့ လေးက
ကျနော့်ဘ၀ လမ်းကြောင်းတွေ ပြောင်းသွားအောင်…၊ အောင်မြင်မှုတွေ လမ်းခင်းပေးလိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှ မတွေးမိခဲ့ပါဘူး..။
လူတစ်ယောက်က ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀လမ်းကို ဦးတည်ပြီး လျှောက်နေပေမယ့်…..။
လူဟာ ကံဇာတ်ဆရာ စီမံမှုအတိုင်း ကပြရတယ်ဆိုတာလေးပါ…။
ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ မပါပေမယ့် အချိန်တန်ရင် မဖြစ်လို့ မရ၊ဖြစ်လာရပါတယ်…ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်လာဘို့ ကလည်း တစ်ချို့ က ကူညီသူ ၊ တစ်ချို့ က ဖိနှိပ်သူ အဖြစ် ပါရမီ ဖြည့်ရတော့တာပါဘဲ…။ သူတို့ လည်း ရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး…။ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ…။
ပြောင်းဖူးလေး ကို ဖတ်ဘူး ထားရင် ကျနော် ဇာတ်ထဲကို ပန်းချီဆွဲဘို့ လိုက်သွားတာ မှတ်မိမှာပါ…။
ကျနော်က ပန်းချီဆရာဖြစ်ချင်တာ တအားဘဲ..။
ကျနော့်မိဘတွေမှာ မန်းလေးစာနယ်ဇင်း တိုင်းသမနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကျနော်တို့ တနယ်လုံးကို စာပေဖြန့် ချိရေးလုပ်ရင်း ဖွင့်ထားတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ရှိပါတယ်..။ဆိုင်မှာ စာလာဖတ်နေကြ ဆရာထွန်းဆိုတာရှိတယ်..။ သူက မန္တလေးက ဗေဒင်ဟောတဲ့ ဆရာ..။ ကျနော်က ပန်းချီနဲ့ အောင်မြင်မလားလို့ မေးဘူးပါတယ်…။
သူက မင်း တစ်ခြား အနုပညာနဲ့ ပို အောင်မြင်သွားမယ်လို့ ဟောတော့.. လက်မခံခဲ့ ပါဘူး…ကိုယ်မှ တစ်ခြား အနုပညာ မလုပ်တတ်တာ.။
ဇာတ်ထဲ လိုက်ရတာကလည်း အိမ်မှာ ဘာသာရေး ၊လူမှုရေးတွေကြောင့် အိမ်ကသွားထွက်မှ ကိုယ်သိချင်တဲ့ ၊ ရှာဖွေချင်တဲ့ အမှန်တရားတခုကို ရနိုင်မှာမို့စွန့် စားပြီးထွက်ရတာ..လူက ၁၆ နှစ်တောင် မပြည့်တတ်သေးပါဘူး…။
ဒီတော့ ဘ၀ရပ်တည်ဘို့စားဘို့အလုပ်နဲ့ နေရာ လိုနေပြီလေ…။ ရွှေဘို ကားဂိတ်က လဘက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ အလုပ်စုံစမ်းရင်း ဇာတ်မှာ ပန်းချီဆရာလိုတယ်ဆိုလို့ကောက်လိုက်သွားတာ…။ အစားအသောက်ဆင်းရဲလိုက်တာ.. အိမ်မှာ မိုးလင်း လဘက်ရည်နဲ့ ထမင်းကြော်၊ နန်းကြီးသုပ် စားနေကြကောင် ….မိုးလင်းရင် ဘာမှမစားရဘူး…။ အိမ်မှာက အသားဟင်းမပါရင် ထမင်းမဖြစ်၊ နေ့ တိုင်းစားနေရတာ…အိမ်ကိုတော့ လွမ်းတယ်..ဒါပေမယ့် မပြန်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုး..။
တစ်ကယ်တမ်းကြ ဇာတ်ထဲမှာ ၂လ နီးပါးဘဲ ပန်းချီဆရာဖြစ်ခဲ့ တာ …။ ကံကြမ္မာက စ”ပြီလေ..။
ကျနော်လိုက်ရတာက မင်းသား၃ ယောက် ကတဲ့ ဇာတ်ပွဲပါ…။
ခေါင်းဆောင်မင်းသားက အဖွဲ့ သားအားလုံးအပေါ်မှာရင့်တယ်..။
ကိုယ်နဲ့ က လိုင်းမတူလို့ အရင် ကဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့်…ရှမ်းပြည်ကပြန်ဆင်းလာတော့ မိုးကုတ်မှာ ကရတယ်….။
ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ အေးလိုက်တာ…။ ပျော်တယ်…အညာသားလေ..ထူးဆန်းတာတွေ တွေ့ လို့ …တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး…
ရေခွက်လေးထဲကို ရေထည့် ပြီး ဇာတ်ရုံ အပြင်မှာ ၅ မိနစ်လောက်ထားလိုက်ရင် ရေခဲ ဖြစ်နေပြီ…အဲဒါကို သဘောကျတာ..။
ကပြီး ၂ ည မြောက်မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသား ခေါ်တယ်ဆိုလို့ သွားတာပေါ့…ဘာကိစ္စ ရှိလို့ လဲလို့ မေးတော့..
မနက်ကို မန္တလေး ဆင်းမလို့ငါ့ ဝေါ့ကင်းရှုး လျှော်ပေးစမ်းပါတဲ့ ..။
ဟာ….ကိုယ့်အိမ်မှာတောင် ကိုယ့်အကျီ်ကိုယ်လျှော်မ၀တ်ခဲ့ ရဘူး၊ သူ ဒီလို ခိုင်းတယ်..။ နောက် ကိုယ့်တာဝန်က ဒါမဟုတ်ဘူး..ပန်းချီဆွဲဘို့ ဘဲလေ..။
အခြေအတင့် ပြောရတာပေါ့ ..ဒါကျနော့်တာဝန်မဟုတ်ဘူး..မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ။ ဒီမှာ သူက ခြိမ်းခြောက်တာဘဲ..။
ငါခိုင်းတာ မလုပ်ရင် မင်း မနက်ဇာတ်က ထွက်သွားရအောင် ငါလုပ်လို့ ရတယ်ပေါ့..။
ကျနော် တော်တော်ဒေါသဖြစ်တာ…။ဒါပေမယ့် ကိုယ့် အခြေအနေကလည်း မှီတွယ်စရာ လိုနေသေးတော့..စဉ်းစားရတယ်..။
နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်လုပ်ပေးရတာပါဘဲ…။ အဘွားနဲ့အဒေါ်တွေသာတွေ့ ရင် တော့ ရင်ကွဲမှာ..။
မင်းသားက သူ့ ညီ တစ်ဝမ်းကွဲကို အဖေါ် ထည့်ပေးတယ်…ကျနော် ဘိနပ် လျှော်ပေးရတာ ည ၃နာရီလောက်ရှိနေပြီ…။
အေးလိုက်တာ..ရေက ကျင်နေတာဘဲ..။ ကိုင်လို့ ကိုင်ထားမှန်းတောင် မသိရဘူး…။နှင်းတွေကလည်းကျနေတာ..။
ပြီးတာနဲ့ ဘိနပ်ကိုပေးရင်း သူ့ ညီကို ကျနော် ပြောတယ်…
“ မင်းအကိုက ငါ့ မာနကို စော်ကားလိုက်ပြီ…ငါမင်း အကိုကို လက်စားချေမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ” လို့ ။
သူ့ ညီက ပြန်ပြောတာပေါ့..မင်းသားက လာမေးတယ် “ မင်းက လက်ချင်း ယှဉ်မလို့ လား”တဲ့ ။
ကျနော်က မလုပ်ပါဘူးလို့ …တစိမ့် စိမ့် တွေးပြီး နာကျဉ်အောင် လုပ်မှာပါ…ရိုးသားစွာနဲ့ ပေါ့ လို့ ပြောတော့ သူက ရယ်မောပြီး
“ မင်းစိန်ခေါ်တာကို ငါ လက်ခံတယ်”တဲ့ ..။
နောက်ရက် မိုးလင်းတာနဲ့စေတီလေးတစ်ဆူကို ကျနော်သွားပါတယ် …နော် လူငယ်ဆိုတော့ ပြောသင့် မပြောသင့် မစဉ်းစားဘဲ.. ဘုရားမှာ မျက်ရည်ကျရင်းသစ္စာ ဆိုခဲ့ ပါတယ်…။
“ အရှင်ဘုရား….ယနေ့ မှ အစ တပည့် တော်ခေါင်းဆောင်မင်းသား ဖြစ်အောင် ကျိုးစားပါမည်
အခု အသက် ၁၆ နှစ်ပါဘုရား…တပည့်တော်အသက်၂၀ ပြည့် လို့ မှ ခေါင်းဆောင်မင်းသား မဖြစ်ခဲ့ ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးဆွဲ( ဆွဲကြိုး)ချပြီး သတ်သေပါမယ် ဘုရား” လို့သဲတွေကိုင်ပြီး သစ္စာ ဆိုခဲ့ ပါတယ်…။
ကျနော် အပြင်းအထန်လေ့ ကျင့်ပါတယ်…။သဘောကောင်းတဲ့ မင်းသားအလတ်ဆီမှာ အက သင်တယ်..မင်းသမီးတွေကိုေ၇ခပ်ပေးပြီး အကသင်တယ်…ကံကြမ္မာ အလှည့် အပြောင်းနဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် တစ်နှစ်ထဲနဲ့ လက်ထောက်မင်းသား ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်…
( တချို့ ဆို ယိမ်းမင်းသား အဖြစ်နဲ့အနည်းဆုံး ၅နှစ်လောက်ကြာပါတယ်)။
၁၈နှစ်အရွယ်မှာတော့ ဇာတ် တဖွဲ့ လုံးကို ဦးဆောင်ကပြနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ခဲ့ ပါတော့တယ်…။
ခေါင်းဆောင် မင်းသားဖြစ်ပြီး ၅နှစ်လောက်ကြာတော့ ဘိနပ်လျှော်ခိုင်းတဲ့ မင်းသား ဇာတ်ပွဲနဲ့ ကျနော့် ဇာတ် ပွဲတော်တစ်ခုမှာအပြိုင်ကရပါတယ်….
ဘိနပ်လျှော်တုန်းက ကျတဲ့ မျက်ရည်က ဒီအချိန်ရောက်မှ ခြောက်တော့တာပါ…။
ပွဲခင်း၂ ခု ယှဉ်ကမယ့် ပထမ ည ကတည်းက သူ့ ဆီကို သွားတွေ့ ပါတယ်…သူမှတ်မိတယ်…ဒါပေမယ့် ပွဲပြိုင်ကမယ့် မင်းသား…ဆိုတာ သူမသိခဲ့ ပါဘူး…ကျနော်ပြောပြမှ သူသိတာပါ…။ သူ ကျနော့်ကို စိုက်ကြည့် နေတာ အကြာကြီးဘဲ။
ပြိုင်ပြီ ဆိုမှတော့…ဗျာ..။ သူ့ ပွဲခင်းမှာ လူ မရှိသလောက်ဖြစ်အောင်ကို ပညာကုန် ကပြခဲ့ တာပါ…။
ဒါ အက ပြိုင်တာ မဟုတ်ဘူး…မာနနဲ့ ယောကျာ်း တစ်ယောက်ရဲ့ သိက္ခာကို ပြိုင်တာလေ…။
၃ ည ကတာပါ…။ နောက်ဆုံးည နှစ်ပါးသွားပြီးတော့ ကျနော် သူ့ ဆီ ကို သွားပါတယ်…လဘက်ရည် မုန့်၊ စီးကရက်ဘူးတွေနဲ့ ပါ..။
ကျနော်ကလည်း ဘာမှ မပြောဘဲ သူကထားတဲ့ တောင်ရှည်ပုဆိုးတွေကို ယူခေါက်ပေးနေတာပါ…။
ကျနော် မပျော်ပါဘူး…၀မ်းနည်းနေတာဘဲ သိပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ကျနော်သူ့ ကို “ အကို ဘိနပ်လျှော်စရာရှိသေးလား” လို့ မေးပါတယ်…။
သူကျနော့်ကို လှမ်းဖက်ပြီး “ ငါ …မင်းကို ရှုံးသွားပြီ” လို့ ပြောပါတယ်…။
သူ မျက်ရည်ကျနေပါတယ်…ကျနော်လည်း မျက်ရည်ကျနေခဲ့ တာပါဘဲ…။
သူ ကျနော့် ဆရာပါ….
အောင်မြင်တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ဘို့သူ ပါရမီ ဖြည့် ပေးခဲ့ တာပါ…..။ အဲဒီကတည်းက လက်စားချေတဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်တော့တာ ခုထိပါဘဲ..။
လောကဟာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်…တချို့ အဖြစ်တွေက စိတ်ကူးယဉ်တာထက် ပိုပြီး ဆန်းကြယ်တတ်ပါတယ်..။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ကယ်ဖြစ်ချင် တစ်ကယ်လုပ်ပါ….မဖြစ်နိုင်တာ မရှိပါဘူး……မဖြစ်သေးတာဘဲ ရှိတာပါ…။
ဒါကြောင့် ဘယ်လိုမှ မမေ့နိုင်တဲ့ အောင်မြေ မိုးကုတ်မြို့ လေးကို ကျနော် ချစ်ပါတယ်..။
မိုးကုတ်မြို့ သူလေး ထက်ထက်မိုးဦးက အင်တာဗျူးမှာ မေလ ၈ ရက်ဖွားလို့ ပြောတော့…
မွေးလ မွေးရက်တူတဲ့ ကျနော်လည်း ပြန်တွေးရပါတယ်..။
မေလ ၈ရက်ဖွား ကျောက်လေးတစ်လုံး မိုးကုတ်မှာ အောင်မြေနင်းပြီး အဘိုးတန်ကျောက်လေး ဖြစ်ခဲ့တော့
ချစ်သောမိုးကုတ်ကို ကျနော် မေ့လို့ဘယ်ရနိုင်ပါ့မလဲ..။
လွမ်းလဲ လွမ်းဆဲပါ ….မိုးကုတ်မြေ။
“သူကျနော့်ကို လှမ်းဖက်ပြီး “ ငါ …မင်းကို ရှုံးသွားပြီ” လို့ ပြောပါတယ်…။” အဲ့မင်းသားရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားတယ်။ စကားအတင်းစပ် ဆြာခေါင်နဲ့ မွေးလ တူတယ်။ မေလ ဖွား တွေ တော်တော်စိတ်ကြီးတယ်ထင်တယ်။ ဆြာခေါင် ကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ စကားပြောဆင်ခြင်မှ
မောင်နှမချင်း ကြောက်စရာလား.. မရွှေလဲ့ရယ်..
ဟိုက အနုပညာသမားချင်းအတူတူ …လူတယောက်ကို ချိုးတာလေ…။
အညွှန့် ချိုး အနှိမ်ခံရတဲ့ အတွက်..ယောင်္ကျားချင်း မာန ပြိုင်ကြတာလေ..။ မေလ ဖွားက နည်းနည်းတော့ ထက်တယ်ထင်တာဘဲ..။
ကိုယ်က လူတစ်ဖက်သားကို နှိမ်တာ လုံးဝ မကြိုက်တာပါ..ကိုယ့်မှ မဟုတ်ဘူး။ တခြားသူကို နှိမ်ရင်လဲ ၀င် ပြောတတ်လို့ ..။
အနော်လည်း ချစ်ဆဲ လွမ်းဆဲပဲ။
တစ်နှစ် လောက်ပဲ နေခဲ့ရပေမဲ့ အဲ့မြို့ကိုချစ်တယ်။
ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေလည်း ပေါသကိုးးးးး :mrgreenn:
မေ ၈ ဆိုတော့ ပြိဿရာသီဖွားပေါ့။
သစ္စာရှိသော၊ တည်ကြည်သော ပေါ့လေ။
ဇာတ်ကြောင်းလေးက ဖတ်ရင်း ကြက်သီးထလာတယ်။
သိပ်ပြီး ဇာတ်လမ်းတွေ များတာဘဲ..။ သံယောဇဉ်တောင် မတွယ်ရဲ အောင်ဘဲ..။ လူဇိုးမ။
မကေ ကို မလိုင်အစစ်ချက်ပေးမှာပါ.. ဟိုဟာစက္ကူနဲ့ မစားနဲ့ ပေါ့..။
ရှေ့ လျှောက် မလိမ်မာဘဲ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆက်များရင် တစ်ရှုးနဲ့ တွေ့ ပြီမှတ်နော်..။
ဟိုက် ..ဆာခေါင် နဲ့ကျွန်တော် အတူတူပဲ .. အနော်လည်း မေလ ၈ ရက်မွေး ..
ခက်တာက မန်းလေးနဲ့မိုးကုတ် ဒီလောက်နီးတာတောင်မှ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး…
ဂျင်းဘောင်းဘီ လည်သာဂျာကင်နဲ့အကြော်ရောင်းတဲ့ ဂေါ်ရခါးမလေးတွေ လွမ်းလို့ကြုံရင်သွားဦးမှာ..။
ဆောင်းရာသီ ချမ်းတာနဲ့ဘူးသီးကြော် ပူပူလေးနဲ့….မိုက်တယ် သိလား။
မိုးကုတ်သူလေးတွေ..ဆိုတာ…အလွန်ချောဗျ..နော့်…ဦးခေါင် နော့်….ခုခွိခုခွိ…..ပထမနှစ်ကတောင် ရှစ်ယောက်မိသေးတယ်….အဟိဟိ…ပြောရင်ကြွားတယ်ဖစ်မယ်..အဟိဟိ
ချောတာတော့ တစ်ကယ်ပါဘဲ.. ပါးနီနီ မျက်လုံး ညိုပြာပြာလေးတွေနဲ့ ..လှမှ လှ..။
ရှစ်ယောက်တောင်.. အညာခံထိခဲ့တာပေါ့လေ..။ ခုခွိ ခုခွိ..။
2005 မှာ ပြိုင်တာလား
အဲ့ဒီအချိန် မိဗုံ 10 တန်းဘဲရှိသေးတယ်….
ဦးခေါင်ကလဲ ဗုံဗုံကို ကလေးမို့ ဦးစားပေးပြီး မလိုင်ကျွေးတာပါ…။
တူလေး မျက်နှာကလည်း ရှိသေးတယ်လေ..။
တူတစ်ယောက်က အရက်သောက်လွန်းလို့သေပြီတဲ့..။
နောက်တစ်ယောက်က မိန်းမ ယူသွားပြီတဲ့…
ကဲ…။ စိတ်ဓါတ်တော့ မကျပါနဲ့ လေ… ကျန်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး ရှာပေးပါ့မယ်..။
မငိုနဲ့ ရော့ရော့… မလိုင်လေးစားလိုက်…နော်
ဇွဲ သန်သန်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကိုကျော်စွာခေါင်ကိုလေးစားပါတယ်
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုအနှိမ်ခံရလို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်…နောက်မှပြန်တွေးတော့ သူတို့ကို အတော်ကျေးဇူးတင်မိတယ် ..နို့မို့ဆို ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာပါ့မလားမသိ….
လူငယ်ဘ၀မှာ ဇွဲ..လုံ့လ. ၀ီရိယ…မာန်ထက်ဘို့ လဲ လိုလို့ကြိုးစားရတာလေ..။
တစ်ကယ်တန်းကျ ကျေးဇူးရှိပါတယ်.. က ခါနီးတိုင်းလည်း မြင်ဆရာ ကြားဆရာ အဖြစ်နဲ့ စိတ်မှန်းပြီး ကန်တော့ပါတယ်..။
တကယ့်ကို ခံစားလိုက်ရတဲ့အရေးအသားပါပဲ။ တကယ့်ကိုထိမိလွန်းလှပါတယ်
လာအားပေးတာ ကျေးဇူးနော်.. မနုအေး။။
မနုအေးရဲ့ ပို့ စ်တွေမှာများ ကျနော် မအားလပ်လို့ကော်မန့် တွေ မရေးဖြစ်ရင် စိတ်ထဲက နားလည်ပေးပါလို့ လဲ ပြောပါရစေ..။
ဦးခေါင် ရေးတာလေးတွေ ဖတ်ရင်း
ဦးခေါင် ကိုယ်တိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင် လာပြောပြနေသလိုပဲ
ပရိုဂျက်တာ လေး နဲ့ ပုံရိပ်တွေ ပြလိုက်
အဲဒီလို ကို ခံစားရတဲ့အထိ
လက်ရာမြောက်အောင် ရေးနိုင် တွေးနိုင်ပါပေတယ်ဗျာ
ဒီလို လူမျိုးတွေကြောင့်၊ ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်
အခု ကျော်စွာခေါင် ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပေါ့နော်…
အဲဒီ မင်းသားရော အခု ရှိသေးလား ဟင်
ငယ်ငယ်က အဖေက ဇာတ်ကကန်ထရိုက်သွင်းတယ်။
ပွဲငှားဖို့ သွားကြည့်ရင် မင်းသားတွေက လက်စွမ်းကုန် က သလောက်
တောရောက်ရင် တောက လူတွေကို အထင်သေးပြီး မင်းသားတွေ ခိုပြီး က တယ်။
ဇာတ်ဆိုတာ မြို့နေလူထုထက် တောနေလူထုက အားပေးကြတာကို မသိကြဘူး။
အဖေက ဇာတ်ပွဲသွင်းတိုင်းလည်း ရှုံးတာပဲ။
ရှုံးလည်း နှစ်တိုင်း သွင်းတာပဲ။